Uganda waxay udiyaarinaysaa ciidamadeeda doorashooyinka
Dalka Ugandha ciidamada amaanka ayaa feejignaan dheeri ah ku jira si ay uga hortagaan banaanbaxyada lagu taageerayo heesaa doonaya inuu madaxweyne u tartamo ku dhowaad 40 sano.
Yoweri Museveni ayaa amar ku bixiyay in booliska iyo dhaqdhaqaaqa dadka la xadiday bilihii la soo dhaafay wixii ka dambeeyay 9 fiidnimo waqtiga maxaliga ah sababo la xiriira faafitaanka Covid-19.
Qaar ka mid ah Soomaalida danaha kala duwan ka leh dalka Uganda ayaa Axadle u sheegay in ay ka baqayaan in rabshadaha ka dhashay doorashada kadib ay saameyn taban ku yeeshaan shisheeyaha.
Musharax Hogaamiye Museveni ayaa galabnimadii Isniinta la kulmay lix safiir oo ka kala socda Holland, Masar, Mareykanka, Japan, Boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Boqortooyada Ingiriiska.
Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Uganda ayaa lagu sheegay in safiiradan uu qaabilay Yoweri si ay uga wada hadlaan xaalada dalkiisa, arrimaha caalamiga iyo arrimo kale oo la isku afgartay.
Musharraxa cadaadiska ku hayaa Yoweri Museveni oo 38 jir ah Robert Kyagulanyi Ssentamu, oo ku magac dheer Bobi Wine, waa fannaan caan ah oo qoraa ah.
Wuxuu ku eedeeyay ciidamada amaanka dalkiisa inay garaaceen qaar kamid ah taageerayaashiisa, wuxuuna ku baaqay in doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dhacdo Uganda si loo tixgaliyo rabitaanka shacabka.
Dadka u soo baxay codbixinta ayaa lagu qiyaasaa 17.6 milyan, subaxnimada Khamiista ayaa albaabada loo furi doonaa goobaha codbixinta, iyadoo la hubinayo farqiga u dhexeeya Covid-19 iyo xirashada wejiga iyo gacmo gashi
Sooyaalka Doorashoouyinka Uganda
Markii Idi Amin qabsaday talada Waddanka Uganda 1971 Yoweri Museveni waxa uu u cararay Dalka Tanzania kaddibna waxa uu halkaas ka aasaasay Jabhadda badbaadad Qaranka (Front for National Salvation) taasina waxa ay u suuragelisay 1979 in uu talada ka tuuro Xukunkii Idi Amin, Yoweri iyo saaxiibadii 1980 waxa ay qorsheeyeen dhisidda dowlad kumeelgaar ah oo dalka gaarsiisa doorashooyin balse doorashadaas oo korjoogayaashii kaqaybgalaya ya qaxiijiyeen in kushubasho iyo xatooyo kadhacday waxa ku guuleystay Milton Obote.
Museveni iyo madaxweynihii hore ee Uganda Yusufu Lule markii ay ogaadeen in laga guuleystay waxa ay aas-aaseen dhaqdhaqaaqa hubeysan ee National Resistance Movement kaddibna dagaal ku dhisan ku dhufo oo kadhaqaaq ayay ku qaadeen xukunkii Milton Obote, Jabhadda NRM waxa u suuragashay January-26-1986 in ay qabsato xukunka dalka Uganda.
1986 Yoweri Museveni waxa uu isu caleema-saaray madaxweynaha Uganda, May 9, 1996 ayaa dib loo doortay, waxa ay ahayd doorasho hal xisbi iyo hal musharax ah kaddibna taageerayaashiisa ayaa ku guuleystay in ay galaan golaha shacabka islamarkaana ay wax ka beddelaan xeerarka iyo Dastuurka Waddanka, sidaas awgeed 14 sano kaddib 2001 ayaa mar kale dib loo doortay Museveni, 2006 ayaa haddana mar kale dib loo doortay kaddib markii wax laga beddelay, 2016 ayaa mar kale dib loo doortay, dhammaan doorashooyinkaas Korjoogayaasha iyo hay’adaha caalamku waxa ay ku sheegeen kuwo kudhisnaa boob iyo xatooyo.
35 sano kaddib Yoweri Kaguta Museveni oo 76 jir ah waxa uu isu diyaarinayaa in uu markii 6aad noqdo madaxweynaha Uganda
Xigasho: The Tower Post / Warbixinta Afrika / Axadle.
Lewandowski: Jurgen Klopp waa tababare xun